UHeathrow udibana noMicrosoft ukulwa ukurhweba ngokungekho mthethweni kwezilwanyana zasendle
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » isikhululo » UHeathrow udibana noMicrosoft ukulwa ukurhweba ngokungekho mthethweni kwezilwanyana zasendle
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • ulwaphulo-mthetho • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Technology • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlumayo zase-UK
UHeathrow udibana noMicrosoft ukulwa ukurhweba ngokungekho mthethweni kwezilwanyana zasendle.
Urhwebo lwezilwanyana zasendle olungekho mthethweni luphakathi kwezona zenzo zolwaphulo-mthetho zintlanu zinengeniso yehlabathi kwaye lusoloko luqhutywa ngoonxibelelwano lolwaphulo-mthetho olulungelelanisiweyo olusebenzisa iindlela zethu zothutho nezemali ukuhambisa iimveliso zezilwanyana ezingekho mthethweni kunye neengeniso zabo zolwaphulo-mthetho kwihlabathi jikelele.
I-Heathrow idibana ne-Microsoft, i-UK Border Force CITES kunye ne-Smiths Detection ukuze bathumele inkqubo yokuqala yobuntlola yehlabathi ebonayo kwaye ijolise ekuyekiseni ukuthengiswa kwezilwanyana zasendle kwizikhululo zeenqwelomoya.
Iprojekthi ye-SEEKER iboniswe ku-HRH I-Duke yaseCambridge kumsitho okwikomkhulu leMicrosoft e-UK namhlanje.
Ukulandela iimvavanyo zobuvulindlela e-Heathrow, iMicrosoft ibiza ii-hubs zezothutho zehlabathi ukuba zisebenzise inkqubo ukunceda ukulwa ne-23bn yeshishini lokurhweba ngokungekho mthethweni kwezilwanyana zasendle.
Heathrow idibene kunye Microsoft ukuchophela ityala inkqubo yokuqala yobuntlola yehlabathi ukulwa ukurhweba ngokungekho mthethweni kwezilwanyana zasendle. I-'Project SEEKER' ibhaqa ukuthutyeleziswa kwezilwanyana kwimpahla kunye nemithwalo edlula kwisikhululo seenqwelomoya ngokuskena ukuya kuthi ga kwiingxowa ezingama-250,000 ngosuku. Irekhode i-70% + yezinga eliyimpumelelo lokubhaqa kwaye yayisebenza ngokukodwa ekuchongeni izinto zendlovu ezifana namabamba kunye neempondo. Ngokuchonga izinto ezithengisiweyo ezithe chatha kwaye kwangaphambi koko, abasemagunyeni banexesha elininzi, indawo kunye nolwazi lokusukela abarhwebi bolwaphulo-mthetho kunye nokulwa neshishini lokurhweba ngokungekho mthethweni le-23 yeebhiliyoni zeerandi.
Ukwengeza kwi Microsoft, Iprojekthi ye-SEEKER iye yaphuhliswa ngokubambisana ne-UK Border Force kunye ne-Smiths Detection kwaye ixhaswa yiRoyal Foundation. Abaphuhlisi be-Microsoft bafundise iProjekthi i-SEEKER ukuchonga izilwanyana okanye iimveliso ezifana neemveliso ezingekho mthethweni ezisetyenziswa kumayeza, kwaye ulingo e-Heathrow lubonise i-algorithm inokuqeqeshwa kulo naluphi na uhlobo kwiinyanga nje ezimbini. Ubuchwephesha buzilumkisa ngokuzenzekelayo amagosa okhuseleko kunye neBorder Force xa ebhaqa into yezilwanyana zasendle engekho mthethweni kwimpahla okanye isikena semithwalo, kwaye izinto ezithinjiweyo zingasetyenziswa njengobungqina kwiinkqubo zolwaphulo-mthetho ezichasene nabathumbi.
UMlawuli waseCambridge watyelela Microsoft's ikomkhulu ukuva malunga nokwenzeka kobu buchwepheshe njengenxalenye yomsebenzi wakhe kunye neRoyal Foundation United for Wildlife inkqubo. Ukuxhasa uphuhliso lobu buchwepheshe butsha, iqela leProjekthi ye-SEEKER likwazile ukuxhamla kuthungelwano lwehlabathi lobuchule lwe-United for Wildlife kurhwebo olungekho mthethweni lwezilwanyana zasendle. Ukongeza, i-United for Wildlife iya kusebenza kunye nemibutho esebenzisana nayo kwicandelo lezothutho ukuxhasa ukuhanjiswa kwehlabathi jikelele kwisakhono se-SEEKER.
UJonathan Coen, uMlawuli wezoKhuseleko kwi Isikhululo senqwelomoya saseHeathrow, yathi: “Iprojekthi i-SEEKER kunye nentsebenziswano yethu ne-Microsoft kunye ne-Smiths Detection iya kusigcina inyathelo elinye phambi kwabarhwebi, ngokuphonononga itekhnoloji entsha eya kusinceda ukukhusela ezona zilwanyana zasendle zixabisekileyo emhlabeni. Ngoku kufuneka sibone iindawo ezongezelelekileyo zezothutho zisebenzisa le nkqubo intsha, ukuba sifuna ukuthatha inyathelo elibonakalayo kwihlabathi jikelele ngokuchasene nolu shishino lungekho mthethweni.”
I-United for Wildlife ijolise ekwenzeni ukuba abarhwebi bangakwazi ukuthutha, ukuxhasa ngemali okanye ukwenza inzuzo kwiimveliso zezilwanyana zasendle ngokungekho mthethweni ngokwakha ubudlelwane obubalulekileyo phakathi kwecandelo lezothutho nelezemali, imibutho engekho phantsi korhulumente kunye nee-arhente zokunyanzelisa umthetho kunye nokukhuthaza ukwabelana ngolwazi kunye nokusebenza kakuhle phakathi kwezi. abachaphazelekayo. I-United for Wildlife ibisebenza nemibutho efana neMicrosoft ukwazisa ngetekhnoloji enokuxhasa iinzame zokuphazamisa urhwebo lolwaphulo-mthetho lweemveliso zezilwanyana zasendle kwihlabathi jikelele.